မြန်မာ့ဇာတ်ကားများ၏ထူးခြားသောဝိသေသပေါင်း(၁၀၀)+(၂၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာ့ဇာတ်ကားများ၏ထူးခြားသောဝိသေသပေါင်း(၁၀၀)+(၂၅)
Posted by အာဂ on Aug 27, 2011 in Creative Writing, Know-How, DIY, Movies/TV | 16 comments
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုကျွန်တော် ၂တန်း၃တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းကရုပ်ရှင် နှင့်ဗွီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာဇာတ်ကားတွေပဲကြည့်တာများခဲ့ပါတယ်။ စွဲလည်းစွဲလမ်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့၊နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေကိုပိုပြီးတော့ ဘ၀င်တွေ့လာပါတယ်။မြန်မာဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့တစ်ကားရဲ့မထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုး၊ ရိုက်ချက်တွေရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကနေပြေးထွက်ပြီး နိုင်ငံခြားကားတွေရဲ့တင်ပြပုံတွေ ကိုကြည့်ရတာ့အခါမှာတောသားမြို့ရောက်သလို သလိုတအံတသြလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်ကမြန်မာဇာတ်ကား တွေကိုမကြည့်တော့တာကလွဲလို့မြန်မာရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေ အပေါ်မှာအမြင်ကြည်ခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ဆီကနိုင်ငံရပ်ခြားဇာတ်ကားတွေလိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အကုန် အကြခံပြီးရိုက်နိုင်မလဲ။ သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်အဆင်ပြေအောင်ရိုက်နေတာပဲ လို့ဖြေတွေလေးတွေးလို့မကြည့်ရင်သာရှိမယ်လက်ခံနိုင်ခံပါတယ်။ နောက်ပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားတွေကဇာတ်လမ်း တွဲတွေထုတ်လွင့်လာကြတော့ကျွန်တော်လည်းကိုရီးယားတွေကိုကြိုက် လာပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုကိုရီးယားကားတွေကိုကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ဟာဒါမျိုးလေးတွေကို ငါတို့မြန်မာတွေကဘာလို့လိုက်ရိုက်လို့မရနိုင်ရမှာလည်း ၊ဘာကုန်ကျစားရိတ်မှလည်းထွေထွေထူးထူးရှိတာမဟုတ်ပဲ။လို့တွေးမိပြီးကိုးရီးယားကား တစ်ကားကြည့်ပြီး ကြည့်ပြီးတိုင်မုဒိတာပွားနေမိတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်၊ မြန်မာတွေဘာကြောင့်ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးတွေမရိုက်သလဲလို့ပေါ့။ကျွန်တော်ခပ်လွယ်လွယ်ပဲအဖြေတစ်ခုရသွားတယ်။အဲဒါဘာလည်းဆိုတော့မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗွီဒီယိုဇတ် ကားတွေကိုဖန်းတီးနေကြသူတွေကတစ်နပ်စားကြံပြီး အလွယ်လိုက်နေကြတာတွေကိုအများကြီးတွေ့ရသလို၊မင်းသား၊မင်းသမီး၊ ဇာတ်ညွန်းရေးသူတွေအစအားလုံးပေါ်ပင်အနုပညာကိုဖန်တီးနေတာလည်းတွေ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုရက်(၂၀)နဲ့အပြီးရိုက်ကြတာမျိုးရှိကြသလို၊ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကို(၃၊၄၊၅)ရက် နဲ့အပြီးရိုက်နေကြတဲ့အသံတွေကလည်းကြားရပါသေးတယ်။ အဲဒီနောက်ဒေါသခပ်ထွက်ထွက်နဲ့ပဲမြန်မာကားဆိုရင် နိုးလို့ပြောပြီးလက်ကာပြနေမိတာအခုထိပါပဲ။ဒါတောင်မလွဲသာလို့ကြည့်နေရတဲ့ ကားတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ထားပါတော့အဲဒီလိုအဖက်ဖက် ကညံဖြင်းနေတဲ့မြန်မာကားတွေဘာကြောင့် ညံ့သထက်ညံ့လာသလဲဆိုတာကိုအတွေးတောတဲ့ ဘလောဂ်ကာတစ်ယောက်ကမြန်မာကားများကြည့်ပြီးရရှိလာတဲ့ ဗဟုသုတ၁၀၀ဆိုပြီးရေးသားထားတာလေး ကိုဖတ်ကြည့်မိလိုက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျသွားတယ်။ အဲဒီထဲကဟာတွေကအပေါ်ယံကြည့်မိရင်တော့လှောင်ထားသလို၊ ဟာသဖြစ်အောင်ရေးထားသလိုထင်ရပေမဲ့ တကယ်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ချက်တွေဆိုတာမြန်မာကားတွေကြည့်ဖူးကြ သူတိုင်းငြင်းလို့ရမယ်မထင်မိပါဘူး။
ဒါကြောင့်ဒီဗဟုသုတ၁၀၀ကိုပြန်လည်ဖော်ပြပါရစေလို့လည်း မူရင်းရေးသားသူနဲ့www.Planet.com.mmပေါ်မှာတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြ သူကိုမွန်စတားအော့ဖ်ရောခ်ကိုပါတောင်းဆိုရင်း…..
၁။ မြန်မာလူမျိုးများသည် ခဏခဏ အတိတ်ကို ပြန်သတိရ လေ့ရှိသူများဖြစ်ကြပြီး များသောအားဖြင့် အတိတ်ကို အဖြူအမည်းဖြင့်သာ သတိရလေ့ရှိသည်။
၂။ သီချင်းနားထောင်လေ့ရှိသူများဖြစ်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေရင်း အတိတ်အကြောင်းများ ပြန်တွေးလေ့ ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
၃။ စားသောက်ဆိုင်တွင် စကားစမြည် ပြောမည်ဆိုပါက.. အစာလုံးဝမစားရ။ (သိပ်စားချင်လျှင် အရည် တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှ စားခွင့်ရှိသည်။)
၆။ ထိုမိန်းကလေးသည် Hand phone ရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် လမ်းသွားလမ်းလာ များကိုသာ အကူအညီတောင်းလေ့ရှိသည်။
၇။ Professional Graphic Designer တစ်ယောက်သည် Laptop ဖြင့် Touch Pad ကိုသုံးပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းများကို Microsoft Paint ဖြင့် ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။
၈။ Instant Messenger / Chat Client ဆိုသည်မှာ Pagemaker / Microsoft Word ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
၉။ Computer ပညာရှင်များသည် စာရွက်များဖြင့်သာ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြပြီး ကွန်ပြူတာ သုံးလေ့မရှိကြ။
၁၀။ သူခိုးများသည် အသံမကြားအောင် ခြေဖျားထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိသည်။
၁၃။ လူမိုက်များသည် ဘောင်းဘီသာဝတ်ကြပြီး ပုဆိုးဝတ်လေ့မရှိကြ။
၁၄။ လူဆိုးခေါင်းဆာင် အများစုသည် ကုတ်အင်္ကျီ (သို့) Leather Jacket ၀တ်လေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ဦးထုပ် ဆောင်းတတ်ကြသည်။
၁၆။ ထောင်မှထွက်လာသူများသည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်စားလေ့မရှိဘဲ လူဆိုးများဖြင့်သာ ပြန်လည်ပေါင်းသင်းပြီး ဆက်လက်ဆိုးသွမ်းကြသည်။
၁၈။ မြန်မာလူမျိုးများသည် ရေကူးကန်နားသို့ ရောက်လျှင် မည်သူ့ကို မဆို ရေထဲသို့ တွန်းချလေ့ရှိသည်။
၁၉။ စီးပွားရေးသမား အများစုသည် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ၀တ်စုံပြည့် ၀တ်ဆင်သွားလာလေ့ရှိသည်။
၂၁။ ဖန်ခွက်ကျကွဲလျှင် ထိုသူနှင့် ပတ်သက်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ သေဘေး (သို့) အန္တရာယ် နှင့် ကြုံနေရသည် မှာ အသေအချာပင်။၂၂။ သေခါနီးလူမမာ များသည် စကားအလွန်များသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
၂၄။ ကျေးရွာတိုင်းတွင် ထန်းတောရှိတတ်ပြီး၊ အဆိုပါထန်းတောတွင် အချိန်ပြည့် မူးရူးနေသူများဖြင့် ပြည့်နေသော ထန်းရည်ဆိုင် ရှိသည်။
၂၅။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀သည် ကင်တင်းတွင် တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး ရီစရာဟာသများပြောကာ ကောင်မလေးများကို ထိုင်ငမ်းနေသော နေ့ရက်များဖြစ်သည်။
၂၆။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆိုသည်မှာ Myanmar Info Tech (ICT Park) နှင့် အင်းလျားကန်ဘောင်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
၂၇။ စာသင်ခန်းထဲတွင် စိတ်ကြိုက်စကားပြောခွင့်ရှိသည်။
၂၈။ ကျောင်းသူ မိန်းကလေး အများစုသည် အသံစွာကျယ်စွာကျယ် စကားပြောလေ့ရှိပြီး၊ ကင်တင်းတွင် ဟီးဟီးဟားဟား လုပ်လေ့ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
၃၀။ အစခံရသော ယောက်ျားလေးတိုင်း ရှက်ပြီး အမှားမှား အယွင်းယွင်း များလုပ်လေ့ရှိသည်။
၃၂။ လူငယ် ယောက်ျားလေး မိန်းကလေးများသည် ၃ ယောက် ၄ ယောက် အဖွဲ့လိုက်သာ ပေါင်းသင်းလေ့ ရှိကြသည်၊ တစ်ယောက်တည်း နေလေ့သိပ်မရှိ။
၃၃။ ယောက်ျားလေးအဖွဲ့မှ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် မိန်းကလေးအဖွဲ့မှ တစ်ယောက်ယောက် ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သွားလျှင် ယောက်ျားလေးများသည် ထိုမိန်းကလေးအဖွဲ့မှ အခြားသော မိန်းကလေးများနှင့် ရည်းစား ဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။
၃၄။ သမီးရည်းစားများသည် သီချင်းဖွင့်ထားသော ပန်းခြံထဲတွင် ပြေးလွှားနေကြလေ့ရှိသည်။
၃၆။ ကိုယ်ဝန်ရှိသော မိန်းကလေး ချော်လဲလျှင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖို့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသည်။
၃၇။ မွေးလာသော ကလေးမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ်လျှင် လင်ယောက်ျားမှာ အလွန်ပျော်ရွှင်လေ့ရှိသည်။
၄၀။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ပါက အဆိုပါ မိန်းကလေးနှင့် ရည်းစားဖြစ်တတ်သည်။
၄၁။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အား မကျေနပ်၍ လက်စားခြေလိုလျှင် သမီးရည်းစားအဖြစ် တွဲလေ့ရှိသည်။
၄၃။ အရက်ဆိုင်အတွင်း ရန်ဖြစ်လျှင် များသောအားဖြင့် ရဲလာဖမ်းလေ့မရှိ။
၄၄။ မူးရူးပြီး အိမ်ပြန်လာလျှင် အိမ်ရှိကောင်မလေးများအား မတရားပြုကျင့်တတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် စားပွဲပေါ်မှ ပန်းအိုးလဲသွားခြင်း၊ ကျကွဲခြင်း၊ ပန်းပွင့်ကြွေခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။
၄၅။ အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်လျှင် မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်သည်။ (မူးနေသူဖြစ်ပြီး မျက်နှာပေါ်တွင် အဆီပြန်နေပါက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသည်။)
၄၈။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလေ့ မရှိသည့်အပြင် ကလေးကို တောရွာတစ်ခုခုသို့ သွားပြီး ခက်ခဲဆင်းရဲစွာ မွေးလေ့ရှိသည်။
၅၀။ ထိုအိမ်ဖေါ် ကောင်မလေးများသည် အိမ်ရှင်၏ သားများနှင့် ငြိစွန်းသွားတတ်ကြသည်။၅၁။ ရုပ်ဆိုးသော အိမ်ဖေါ်အား မည်သူမျှ မတရားပြုကျင့်ခြင်းမရှိ။
၅၂။ ခေတ်လူငယ် အများစုသည် Shopping Mall များ Snack Bar များတွင် တစ်ချိန်လုံး အချိန်ဖြုံးနေတတ်ကြသည်။
၅၃။ အဆိုပါ ဆိုင်များတွင် တွေ့သမျှကောင်မလေးများအား မျက်စပစ်ပြခြင်း စသည် စသည် များ စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
၅၄။ မိန်းကလေးများ အဖွဲ့လိုက် ခရီးထွက်ပါက ယောက်ျားလေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် လမ်းခရီးမှာ ကြုံတွေ့လေ့ရှိပြီး ချစ်သူရည်းစား ဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။
၅၅။ ယောက်ျားလေး မိန်းကလေးအဖွဲ့များတွင် အချောဆုံးတစ်ယောက်မှ လွဲပြီး ကျန်သော သူငယ်ချင်းများမှာ တစ်ချိန်လုံး ဟာသလုပ်ပြီး ရီစရာများ ပြောနေတတ်ကြသည်။
၅၆။ ခေတ်လူငယ်အများစုမှာ မိဘ တစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးလုံးမရှိတတ်ကြ။ ဦးလေး၊ အဒေါ် များ သူငယ်ချင်းများဖြင့်သာ နေလေ့ ရှိကြသည်။
၅၈။ (အရောင်းတာဝန်ခံ/မန်နေဂျာ/Security) မည်သူကမျှ မတားဆီးကြ၊ အနှောင့်အယှက်မပေးလေ့မရှိကြ။
၆၀။ အသက် ၄၀ ကျော် မိန်းမကြီး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်မှာ အတင်းပြောတတ်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
၆၂။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် အဖိုး၊ အဖွားများသည် သြဇာအရှိဆုံးလူများ ဖြစ်ကြသည်။
၆၃။ ညအချိန်မတော် လမ်းမပေါ်တွင် သီချင်းအကျယ်ကြီးဆိုပြီး ဂစ်တာတီးနေသူများကို တရပ်ကွက်လုံးက သည်းညည်းခံကြသည်။
၆၅။ ကောင်မလေးများသည် အဖော်မပါဘဲ ညအချိန်မတော် လူပြတ်သော လမ်းများတွင် သွားလာလေ့ရှိသည်။
၆၆။ ထိုလမ်းများတွင် အဖော်မပါသော ကောင်မလေးအား ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်ဖို့ အရက်မူးနေသော လူရမ်းကားများ လူဆိုးများ စောင့်နေတက်သည်။
၆၇။ ထိုမိန်းကလေးများသည် အများအားဖြင့် အော်ဟစ်အကူအညီတောင့်လေ့မရှိကြ။
၆၈။ ယောက်ျားလေးများသည် တစ်ယောက်တည်းပင်ဖြစ်စေကာမူ ၂ ယောက် ၃ ယောက်မကသော လူဆိုး/လူမိုက်များနှင့် ရန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
၇၀။ အလွန်ချောမောလှပသော ကောင်မလေးများတွင် ခပ်ပေါပေါ ခပ်ချာချာ အကိုတစ်ယောက် ရှိနေတတ်သည်။
၇၂။ နယ်မှ တစ်ယောက်တည်းလာနေသော မိန်းကလေးများသည် သိန်းချီပေးရသော အခန်းများငှားနေတတ်ကြပြီး ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားလေ့ရှိသည်။
၇၃။ ဆင်းရဲသား အလုပ်သမားများသည် စုတ်ချာသော (တစ်ခါတစ်ရံ) စုတ်ပြဲနေသော အ၀တ်အစားများသာ အမြဲလို ၀တ်ဆင်ကြသည်။၇၄။ ချမ်းသာသူတို့၏ သားသမီးများသည် ဘွဲ့ရပြီးသည်အထိ အလုပ်လုပ်လေ့မရှိကြ။
၇၆။ ပိုက်ဆံချမ်းသာသော လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးများသည် ဆင်းရဲပြီးချောမောလှပသော ကောင်မလေးအား လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ယောက်ခမလောင်းများအား ငွေဖြင့် သိမ်းသွင်းတတ်သည်။
၇၇။ အဖြူရောင်ကုတ်အကျီရှည်ဝတ်ထားပြီး နားကျပ်လည်ပင်းတပ်ထားသူတိုင်း ဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ (သို့) ဆရာဝန်တိုင်း ဂျူတီကုတ်ဝတ်ပြီး နားကျပ်လည်ပင်း ဆွဲထားတတ်ကြသည်။
၇၈။ ခွဲစိတ်ကုသမှု မအောင်မြင်လျှင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးသည် ခွဲခန်းအတွင်းမှ ခေါင်းယမ်း၍ (သို့) မျက်နှာပျက်၍ ထွက်လာတတ်သည်။၇၉။ မင်းသား (သို့) မင်းသမီး၏ အမေများတွင် နှလုံးရောဂါ (သို့) သွေးတိုးရောဂါများ ရှိတတ်သည်။
၈၀။ တယ်လီဖုန်းမှ သတင်းဆိုးကြားရလျှင် တယ်လီဖုန်းပြောနေရင်းမှ မူးမေ့လဲသွားတတ်သည်။
၈၁။ အလွန်တော်သော မိန်းမများသည် အသုံးမကျသော (သို့) အလွန်မာနကြီးသော ယောက်ျားများကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။
၈၃။ လူငယ်များ၏ နာမည်အများစုမှာ ခေါ်ရခက်သော သောက်ညင်ကတ်ဖွယ်နာမည်များ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
၈၅။ ထိုသောက်ညင်ကတ်ဖွယ်နာမည်ဆိုးကို မည်သူကမျှ စခြင်းနောက်ခြင်း ပြောင်လှောင်ခြင်းမပြုကြ။
၈၆။ ယောက်ျားနောက် ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားသော မိန်းကလေးများသည် မိဘများအား ခိုးရာလိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း.. လိုက်မရှာရန်နှင့် ခွင့်လွှတ်စေချင်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် စာရေးထားတတ်ကြပြီး အိပ်ယာပေါ် သို့မဟုတ် အိပ်ယာဘေးက စားပွဲပေါ်တင်ထားလေ့ရှိကြသည်။
၈၈။ ယောက်ျားလေးအများစုကတော့ မိဘကို မိန်းမခိုးမည့်ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး လုံးဝ အသိပေးလေ့မရှိ။
၉၀။ ယောက်ျားလေးများ၏အခန်းသည် လူမနေသည့်အခန်းကဲ့သို့ အစဉ်အမြဲရှင်းလင်းနေတတ်ပြီး သန့်ရှင်းနေလေ့ရှိသည်။
၉၁။ အိမ်ဖော်မိန်းမများ၊ ခြံစောင့်များသည် အိမ်ရှင်၏ သမီးအား မမလေး ဟုသာ ခေါ်လေ့ရှိသည်။
၉၂။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစကားများကိုပင် လေးနက်အောင် တမင်ကြိုးစားဖျစ်ညှစ်ပြောတက်သော အကျင့်များရှိလာကြသည်။
၉၃။ လူကြားထဲတွင် အိနြေ္ဒ ပျက်လောက်အောင် တကိုယ်လုံးနှင့် လက်များရမ်းခါလှုပ်ပြီး စကားပြောတက် သူများကို မထူးခြားသယောင် ဆက်ဆံပြောဆိုတက်ကြသည်။
၉၄။ လူငယ်များသည် ပူအိုက်သောရာသီမှာပင် အနွေးထည်များ ၀တ်ဆင်ကြလေ့ရှိသည်။
၉၆။ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းထားလျှင် အလွန်ပင် ရိုမန်တစ်ဖြစ်သည်။
၉၈။ နိုင်ငံခြားသွားပြီး ပညာသင်လာပါက မြန်မာပြည်တွင် အလွန်အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (သို့) ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်သည်။
၉၉။ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးမရှိရင် အတုတပ်ထားတက်ကြသည်။
ဒါကကျွန်တော် အာဂရဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်လေး ၂၅ ချက်ပါ။ မိတ်ဆွေများလည်း ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးလို့ရပါတယ်။
၄..ပိုက်ဆံအိတ်တို့ပစ္စည်း တို့ကောက်ရလို့ပြန်ပေးရင်ပိုင်၇ှင်ကကျေးဇူးဆပ်သည့်အနေနဲ ပိုက်ဆံပေးရင် ဘယ်တော့မှမယူတတ်ကြ။(ပိုက်ဆံပေးပြီးကျေးဇူးဆပ်ရကောင်းလာဟုပင် ဒေါသထွက်တတ်ကြသေးသည်။)
၇..ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးပိုက်ဆံထုတ်ရှင်းလည်း ဘယ်တော့မှအကြွေပြန်မအမ်းတက်ကြ (တချို့ကပြန်မအမ်းရအောင်ပင်ပိုတာပြန်မပေးနဲ့လုပ်ကြတတ်သည်။)
၁၀..ဓားနဲ့ထိုးခံရပြီးပြီးခြင်းလူနာကိုဆေရုံပို့ဖိုထက် လူနာလဲကျနေသည့်နေရာတွင်သာကြာရှည်စွာ စကားများပြောနေတတ်သည်။
၁၁..ကောင်းလေးနှစ်ယောက် ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ရှိလျှင်ကောင်လေးတစ်ယောက်က သေပေးရသည့်ထုံစံရှိသည်။
၂၀..အသက်ကြီးသောသဌေးကြီးများ၏အသက်ကိုမကြာခဏကယ်တင်မယ့်သူပေါများသည်။ အဆိုပါသဌေးများကလည်းကယ်တင်သူကိုမွေးစား၍သော်၎င်း။အမွေပေး၍သော်၎င်းကျေးဇူးပြု တက်ကြသည်။
၂၂..အမျိုးသားမျာရေချိုးခန်းကထွက်ထွက်ခြင်းအမျိုးသမီးများက မျက်နှာသုတ်ပုဝါပေးဖို့အတွက် စောင့်နေတက်ကြသည်။
၂၃..လဲကျနေရာမှဓားကိုင်ပြီးထလာသောလူဆိုးကဖက်၍ အောင်ပွဲခံကြည်နူးနေသောလူကောင်းနှစ်ယောက်ကို ဓားနှင့်ပြေးထိုးလျှင်။ထိုသို့ဓားနှင့်ထိုးမည်ကိုမြင်သောသူကရှောင်ပြေးခြင်း၊ လှဲချခြင်းပြန်လည်ခုခံခြင်းတို့ထက် ခနာကိုယ်ကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်၍ကိုယ့်ကိုယ့်ဝင်ရောက်အစတေးခံပြီး အသက်အသေခံကြတတ်သည်။
၂၄..မြန်မာပြည်တွင်တူ၊တူမများကမိမိထက်အသက်များစွာကြီးသောအဒေါ်၊ဦးလေးများကိုမလေးစား တက်ကြ။အဆိုပါဦးလေး၊အဒေါ်များကလည်း လူငယ်များထက်အဆပေါင်းများစွာ ရှက်သိက္ခာမဲ့တက် ကြသည်။
အပေါ်က အချက်၁၀၀ ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးခြောက်နှစ်တုန်းက ဟာလေးတွေပါ။ အဲဒီ အချက်ကလေးတွေ ထွက်ပြီးသိပ်မကြာပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့ အဲဒါကိုကူးပြီးတော့ ဒါရိုက်တာတွေကို လိုက်ဝေပါသတဲ့။
ပြီးပြည့်စုံလွန်းလို့ ဘာထပ်ထည့်ရမလဲစဉ်းစားမရဖြစ်သွားပီ။ရတတ်ပါတယ် စေ့စေ့စပ်စပ်နော်။အထူးသဖြင့် လပ်ကီး ဆဲလ်ဗင်းမှရိုက်သော ဇာတ်ကားတိုင်းတွင် မင်းသားနှင့်ဇာတ်ရံများ တူတူပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာကားကွ လို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ထထအော်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်တူလေးကို သတိရမိပါတယ်။ ငါ့နှမလေးပွသွားပြီ ဆိုတဲ့ ဟာသခေါင်းစဉ်တတ် ရုပ်ရှင်ကားမှာ အကယ်ဒမီမင်းသား မောင်ခန့်စည်သူ နဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီး စိုးမြတ်သှူဇာတို့က လင်မယားပါ။ ခန့်စည်သူအိမ်မှာ ခန့်စည်သူအမေရယ်ညီမရယ်နဲ့ အတူနေကြတာပါ။ ခန့်စည်သူနဲ့ စိုးမြတ်သူဇာတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာကျန်နေတုန်း အပြင်က အမေနဲ့ ညီမလုပ်တဲ့သူ (ဂျင်းနီလို့ထင်ပါတယ်) ပြန်လာကြပါတယ်။ အမေကပြောပါတယ်။ ထမင်းစားကြရအောင်တဲ့။ ခန့်စည်သူကပြန်ပြောပါတယ်။ အမေတို့မရှိတဲ့ အချိန်လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ လင်မယား အ၀ဆွဲပြီးကြပြီတဲ့။ စိုးမြတ်သူဇာ က ဘာတွေပြောနေတာလဲ လို့ဝင်အော်ပါတယ်။ ခန့်စည်သူက ထမင်းအ၀စားတာပါလို့ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ပြောပါတယ်။ စကားလုံးတွေက တစ်ထပ်တည်းမဟုတ်ပေမယ့် ဆိုလိုရင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီစကားတွေကို အမေနဲ့ ညီမအရင်းရှေ့မှာ ပေါ်တင်ကြီးပြောနေတာပါ။ တွေးသာကြည့်ပေတော့ ခွေးသဘာပတိဖြစ်သလို ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
မြန်မာကားတွေကတော့ ပြောရင်ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၁၅ မိနစ်လောက် ထိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းကိုကြိုသိနေတော့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုးရှေးခေတ်က အဖြူအမဲကားတွေကတော့ သူခေတ်သူအခါနဲ့သူ တန်းဝင်သေးတယ်။
ကျနော် မင်းသား လုပ်တဲ့ တော်ဝင်သူရဲကောင်း ဇတ်လမ်းထဲမှာပေါ့ လေထဲမှာ ခုန်ပျံရတယ်ဗျ..
ကျုပ်ကတော့ သွားချင်တဲ့သူတွေကို ခေါ်ပေးတတ်တယ်…. ဟီးဟီး….စတာ
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ ဒါရိုက်တာ သိန်းဟန်(ဖီးနစ်) ရိုက်တဲ့ 3+4 အချစ်ဆိုတဲ့ကားမှာဆိုရင် တောကတက်လာတဲ့ ကြက်သမားက တိုက်ကြက်ကြီးပိုက်လာတဲ့အခန်းပါတယ်ဗျ ။အဲဒီမှာ ပိုက်လာတဲ့ကြက်က မွေးမြူရေးကြက်ကြီးဗျာ ။ စိတ်ကိုလေသွားတာပဲ။ ဆက်လည်းကြည့်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါရိုက်တာကိုလည်းတော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ် ။ ပရိတ်သတ်ကိုမထေမဲ့မြင်လုပ်တာပဲဆိုပြီး။
ဟိုနားပြောရတာ..ဟိုနားဆဲရတာနဲ့ ..မမိုက်ပါဘူး .. မကြည့်တာပဲကောင်းတယ်..
ဟီဟိ အရမ်းကိုပြည့်စုံတာပါပဲ ။ မြန်မာဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကတော့ ။ တစ်ခုကျန်ခဲ့သေးတယ် မြန်မာဇာတ်ကားများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့များသည် လူဆိုးများသေဆုံးပြီး မင်းသားဓါးထိုးခံရပြီချိန်မှရောက်ရှိလာတတ်ခြင်း ။ မြန်မာဇာတ်ကားတွေမှာတော့ ရင်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ကျန်နေတာ တစ်ကားပဲရှိတယ် ။ မင်းသားစိန်မြင့်နဲ့ရိုက်တဲ့ “ အဖေတစ်ခုသားတစ်ခု ´´ အဲလိုရသမြောက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေ နောက်ကော ပေါ်ထွက်လာဦးမှာလား ။ ကမ်းခြေမှာအပန်းသွားဖြေတာတို့ ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ရည်းစားထားတာတို့ကတော့ မွဲပြာပုဆိုးဖြစ်လာပါပြီ ။
yetazar ပြောတာတွေအပေါ်မှာ ပါဝင်ပြီးပါပီ။ကျွန်မတို့ အသက်နဲ့ မှီပါဦးပေါ့မလား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ဖို့ ကိုနော်—
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်ဖတ်တာမှကျန်သွားတာ မမီးမီးရေ့ ။ ခုပြန်ဖတ်လိုက်တော့မှတွေ့တယ် ။ မမီးမီးပြောတာလေးကို စဉ်းစားမိတယ် ။ ဟုတ်တယ်နော် ဘယ်အချိန်မှာမှ မြန်မာဇာတ်ကားတွေ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလာမှာလဲမသိဘူးနော် ။ ဟဲဗီးဖြိုးတို့ အဘိုးနေရာကသရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှလား မသိဘူး ။ ရွှေကြက်ဖ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလဲ သွားပြိုင်တာတော့မြင်ဖူးပါရဲ့ တစ်ခါမှ ပထမရတယ်မကြားမိပါဘူး ။ ကိုလွှင်မိုးကတော့ စက်တွေငှားပေးပြီး ရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လဲ ရိုက်ကွင်းတွေ တိုးတက်လာတာရယ် ၊ ကျူပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေ ပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်တာရယ်ပဲရှိတယ် ။ ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ …………………. ။ မြန်သာခေတ်ဟောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွာသတိရမိတယ် “ ထူးမခြားနား ´´ ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေတချို့ဟာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ မင်းသားဆင်းရဲရင် မင်းသမီးကချမ်းသာ၊ မင်းသားကချမ်းသာရင်မင်းသမီးက ဆင်းရဲ လူကြီးတွေကသဘောမတူပဲခွဲ။ လူငယ်တွေရဲ့အချစ်ကသာ မှန်တယ်ဆိုပြီးခိုးရာလိုက်ပြေးဖို့ မြှောက်ပေးနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ လူကြီးတွေကို ဘာမှမသိပဲ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ခွဲတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမျိုးနဲ့ လူကြမ်းဆန်ဆန်နေရာမျိုးက ထည့်ထားတာ မိဘမေတ္တာကို စော်ကားရာရောက်တယ် ထင်မိတယ်။
အခု မြန်မာ ဇာတ်ကားတွေက အပြောအဆိုတွေ တော်တော်လေးကြမ်းလာတယ်
အဓိပါယ် နှစ်ခွဖြစ်စေတဲ့ စကားမျိုးတွေကိုလည်း တော်တော်သုံးလာကြတယ်……
အဲလိုသုံးတာတွေပဲ ဟာသဆိုပြီး ရယ်နေကြတာပဲ
ဒါ့ကြောင့် ရုံမှာလည်း သွားမကြည့်ဘူး အခွေလည်း ငှားမကြည့်ဘူး
အရင်တစ်ပတ်က မြန်မာ့ရုပ်သံကပြသွားတဲ့ ကောလိပ်ဂျင်၊ ကျော်ဟိန်း၊ ဆွေဇင်ထိုက် တို့သရုပ်ဆောင်တဲ့ အကာကအချစ် အနှစ်ကမေတ္တာဆိုတဲ့ကားလေးဆို ရယ်စရာလေးတွေထည့်ထားတယ်
ထွက်သမျှကားမှန်သမျှ ဟာသကတွေကများနေတယ်။ ပြက်လုံးတွေကလည်း အောက်လုံးတွေချည်းပဲ။ တစ်ခါတစ် အဖေနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေတောင် ငပေါလိုလို၊ငကြောင်လိုလိုလုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကိုယ့် ချိုင်း ကိုယ် ကလိထိုးမှပဲ ရယ်ချင်ရယ်ရဦးမယ်…။
မြန်မာခွေငှားကြည့် ရင် ၂၀၀ ကျပ် ကိုရီးယားခွေ နဲ့တခြား နိုင်ငံခြား ကား တွေ အပိုင်ဝယ် တာက တခွေ ၂၅၀ ကျပ် ပဲ ပေးရပြီး အကြာကြီးကြည့်ရတယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာကားကြည့်တဲ့ ဓလေ့
ပျောက် မှာတောင် စိုးနေရပြီ